Mpianatra tsy mitovy amin'ny alika: inona no dikan'izany? | Tontolo alika
ny mpianatra tsy mitovy amin'ny alika dia antsoina hoe anisocoria izy ireo, ary misy asymmetria eo anelanelan'ny mpianatra roa, samy hafa ny sakany. Mitranga izany na amin'ny alika na amin'ny saka, ary miavaka amin'ny tsy fitoviana habe. Izy io dia mety hitranga noho ny antony maro samihafa, ary mitaky fitsaboana veterinera.
Misy izany antony samihafa izany no mahatonga ny fisehoan'io olana io. Ny iray amin'izy ireo dia ny fivontosan'ny faritra eo anoloana, na dia mety noho ny hafa aza izany aretina izay misy fiatraikany amin'ny vatan'ny iris. Antony iray hafa mety hitranga dia ny tsy fahampian'ny fivelaran'ny iris, ary koa ny fitomboan'ny tsindry amin'ny maso, ny aretina, ny tavy misy ny fery izay mivangongo ao amin'ny maso, homamiadana, na ny voka-dratsin'ny fanafody sasany.
1 Ny antony mahatonga ny mpianatra tsy mitovy amin'ny alika
1.1 Fampandrosoana iris tsy ampy
1.2 Anisocoria amin'ny trauma
1.3 Tra-boina miverimberina amin'ny maso
1.4 Fifandraisana amin'ny vokatra zavamaniry, akora simika na zava-mahadomelina
2 Mpianatra misavoana amin'ny maso iray
3 Inona no dikan'ny hoe mihalehibe ny mpianatra amin'ny alika?
4 Ny alikako dia nanitatra mpianatra ary nihovotrovotra izy
4.2 Trastorn ara-tsaina
4.3 Aretim-po maneritery
5 Fanadihadiana alika mpitsabo biby miaraka amin'ny mpianatra mihalehibe
Ny antony mahatonga ny mpianatra tsy mitovy amin'ny alika
Fampandrosoana iris tsy ampy
Antony iray hafa mety hitranga fampandrosoana tsy ampy irisary koa ny fitomboan'ny tsindry eo amin'ny maso, ny otrikaretina, ny vatan'ny paratra izay mipoitra amin'ny maso, homamiadana, na ny voka-dratsin'ny fanafody sasany.
Anisocoria amin'ny trauma
Ny kapoka mafy amin'ny lohan'ny alika dia mety hitarika mpianatra tsy mitovy. Mety ny trauma dia nisy fiantraikany teo amin'ny hozatra izay mampifandray ny maso amin'ny ati-doha.
Raha tsy misy famantarana hafa ao amin'ny canine manaitra, dia tsara ny miandry 24 ora mba hahamora azy ary raha tsy izany, tsy maintsy entinao any amin'ny mpitsabo aretin-biby izy.
Tra-boina miverimberina amin'ny maso
Vokatry ny alika fikororohana sy fikosehana tsy an-kijanona ao amin'io faritra io, dia mety hiteraka anisocoria. Azonao atao ny manatsara ny toe-javatra amin'ny alàlan'ny fametahana vozon'akanjo Elizabethan eo aminyRaha tsy mihatsara ny haben'ny mpianatra mandritra ny roa andro dia tonga ny fotoana iantsoana ilay manam-pahaizana manokana.
Fifandraisana amin'ny vokatra zavamaniry, akora simika na zava-mahadomelina
Amin'ny tranga misy ny fisehoan'ny maso iray amin'ireo singa rehetra ireo, mety hiteraka tsy fitoviana eo amin'ny mpianatra. Amin'ireto tranga ireto dia ilaina ny manasa tsara amin'ny vahaolana saline steril, mba hahazoana antoka fa mivoaka na mihalevona miaraka amin'ny ranon-javatra ny sombintsombiny.
Ho an'ny diagnostika marina dia ilaina ny manombatombana tsara ilay alika ny mpitsabo biby, mamakafaka ny antony mety ho neurolojia sy ocular tompon'andraikitra amin'ny anisocoria. Matetika ampiasaina amin'izany ny teknolojia ultrasound., mahay mamantatra lesoka amin'ny masony.
Ny tomography sy ny résonance magnetic resonance kosa dia tena ilaina amin'ny fitadiavana lesoka amin'ny ati-doha, izay mety hiteraka an'io olana io.
Miankina amin'io diagnostika io ny fitsaboana anao. Miankina amin'ny antony, fanafody iray na iray hafa no holazaina, izay mety ho hafa be arakaraka ny maso na ny ati-doha ny olana.
Tsy maintsy omen'ny manam-pahaizana izany; aza mitsabo irery ny biby, satria mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe isika. Toy izany koa ny fitsaboana dia tsy maintsy ampiharina amin'ny fomba henjana araka ny voatondro amin'ny dokotera, tsy misy fanelingelenana ary feno ka ny valiny dia tsara indrindra ary amin'ny fotoana fohy indrindra.
Tsy misy fomba hisorohana an'io fahasamihafana eo amin'ny haben'ny mpianatra io, noho ny antony isan-karazany mahatonga azy. Na izany na tsy izany, mety ny mandinika matetika ny masontsika, satria hita taratra amin'izy ireo ny soritr'aretin'ny aretina isan-karazany. Alohan'ny hisehoan'ny iray amin'izy ireo, dia tsy maintsy mandeha any amin'ny veteritra haingana indrindra isika.
Ny azontsika atao dia ny misoroka toe-javatra mety hitranga amin'ny biby, izay mety hianjera izy na mamely ny loha na mandratra masoZava-dehibe ihany koa ny fanananao fiaraha-miasa eo am-piandohana tsara mba tsy hiadianao amin'ireo biby fiompy hafa ary hiteraka ratra miteraka, ankoatry ny zavatra hafa, anisocoria.
Ny tontolo iainana itehirizana ny alika dia tsy maintsy arovana araka izay azo atao. esory lavitra ny zavatra maranitra na mavesatra izay mety hianjera eo amboniny, simika sy ivelany, tsimparifary, hazo ary rantsana dia mety hanimba zavatra lehibe.
Araky ny efa noteneninay taloha. ny antony mahatonga ny anisocoria dia mety ho avy amin'ny neurolojia sy fiaviana ocular.
Mba hamaritana azy ireo dia ilaina ny fandinihana lalina ny mpitsabo biby, amin'ny alàlan'ny fampiharana fitsapana manokana toy ny ultrasound, scanner CT, na MRI.
Mpianatra misavoana amin'ny maso iray
Tsy ara-dalàna raha mihalehibe ny mpianatry ny alika, mainka fa raha mpitovo izyRaha mitranga izany dia azo atao fa ny biby fiompy dia mety nijaly tamin'ny trauma na nisy olana tamin'ny maso ary tamin'ny tranga sasany noho ny olana ara-tsaina.
ihany koa midika hoe fisian'ny ratra amin'ny ati-doha marefo ny vinavinany, fa ny mpitsabo biby ihany no afaka mamaritra ny antony mety hitranga sy mampihatra ny fitsaboana sahaza azy.
Antony hafa mahatonga ny anischornia na fanitarana mpianatra tokana, dia ratra amin'ny hazondamosin'ny tranon-jaza. Ny kapoka mafy avy amin'ny fianjerana, fanafihana na noho ny fihitsahana no tena antony mahatonga an'io aretina io amin'ny biby.
Inona no dikan'ny hoe mihalehibe ny mpianatra amin'ny alika?
Aleo ataontsika ao anaty maso aloha ilay mpianatra, satria io no teboka kely izay eo afovoan'ny maso sy ao anaty iris. Izy io dia membrane hozatra izay ny elastika dia mamela azy hifanaraka sy hivelatra, ho setrin'ny fanentanana maivana.
Ao amin'ny alika, lehibe kokoa ny mpianatra, manome vina fahitana misimisy kokoa. Ireo dia mirongatra noho ny antony samihafa, ao anatin'izany:
Amin'ny toe-javatra mampihetsi-po sasany.
Rehefa ilaina ny misambotra hazavana bebe kokoa.
Ho an'ny fijaliana amin'ny aretina.
Amin'ny fotoana akaiky ny fahafatesana.
Mydriasis na mpianatra manitatra mety ho eo amin'ny maso iray, na amin'ny roa. Rehefa mitovy ny haben'ny mpianatra dia heverina ho ara-dalàna izy ireo, dia hohamafisin'ny hazavana.
Ny alikako dia nanitatra mpianatra ary nihovotrovotra izy
Ireo no mety ho antony, maninona ny alika no nanitatra mpianatra sy mangovitra:
Alika mamo Izy dia misy hypersalivation, fanintona, fangovitana ary mydriasis. Izy koa dia toa tsy rototra, mandoa ary kivy. Ny antony rehetra dia hitondra azy any amin'ny vonjy taitra veterinary.
Indraindray rehefa miady saina ny biby fiompy, miharihary ireo soritr'aretina roa ireo. Ohatra ny phobia an'ny afomanga. Amin'ireto soritr'aretina roa ireto dia manampy urination tsy voafehy, panting, hypersalivation sy ny hafa. Afaka vahana amin'ny fampiofanana matihanina izy ireo.
Izany dia ahitana ny famerimberenana ny fihetsika sasany ao amin'ny biby, izay tsy mamaly ny fanentanana na toe-javatra manokana. Ny soritr'aretina mitranga amin'ireto tranga ireto dia ny mydriasis.
Fanadihadiana alika mpitsabo biby miaraka amin'ny mpianatra mihalehibe
Fomba iray hitazonana ny alika sy fahitana ny mpianatra dia ny fametrahana azy eo ambony latabatra. Amin'ity tranga ity dia mila mijoro amin'ny faran'ny latabatra ianao ary mifanohitra amin'ny masonao jerenao.
Apetraho amin'ny soroka alika ny sandrinao ankavanana. Ampiasao ny tananao ankavia hanindry mafy ny vavonin'ilay alika mankamin'ny latabatra ary ampidino ambany ny hodi-maso ambany. Ampiasao ny tananao ankavanana hitazomana ilay kaontenera fanafody.
Raha manandrana mitsangana ny alika dia ampitomboy amin'ny sorony ny vatany ambony mba tsy hiarina izy, ary andramo apetraka amin'ny sisiny. Ampiasao ny sandrinao ankavanana sy ny vatanao ambony hitazonana ny alika hiankina amin'ny sisiny.
Ampiasao ny tananao havia hitazona ny lohanao eo ambony latabatra ary ampidino ambany ny hodi-maso ambany. Mora kokoa ny manao an'io fomba io raha misy olona manampy anao. Mba hijerena ny maso dia ampidirina eo anelanelan'ny tanana roa ny loha miaraka amin'ny ankihiben-tànana iray amin'ny hodi-maso ambony ary ny ankihiben'ilay ankibon'ny eyelid ambany.
Mba hahitana ny ampahany amin'ny maso ambanin'ny hodi-maso ambony, atsangano amin'ny masonao ny hodi-maso ambony, izay hanokatra ny masonao. Ny ampahany fotsy amin'ny maso dia ny sclera. Ny sclera dia fotsy mamirapiratra matetika ary misy lalan-drà mena manify kely eo amboniny.
Ny fikarohana tsy mahazatra ao amin'ny iris dia misy:
Ny sisin'ny rava, na dia mety hitranga amin'ny fahanterana aza izany ary antsoina hoe iris atrophy.
Fitomboana amin'ny Iris.
Tasy mainty amin'ny iris.
Tondra-dra amin'ny iris.
Boribory ny mpianatry ny alika raha oharina amin'ny an'ny saka boribory lavalava izy ireo. Ireo mpianatra dia tokony hitovy habe ary tokony hifanaraka amina teboka tena izy rehefa misy hazavana manjelanjelatra mamiratra ao amin'ny maso.
Rehefa misintona ny hodi-maso ambany ianao dia afaka mahita ny hodi-maso fahatelo, antsoina koa hoe membrane nictitating, izay hivoaka ny zoro anatiny ambany amin'ny maso.
Ny hodi-maso fahatelo dia tsy mivoaka mora foana amin'ny mason'ny alika toy ny saka. Ny hodi-maso fahatelo dia mavokely na fotsy fotsy mavomavo ary misy lalan-drà manify eo amboniny. Ny hodi-maso fahatelo dia matetika tsy hita.
Ny fanafody amin'ny maso dia mety mitete na menaka manitra. Mijanona lava ao amin'ny maso ny menaka manitra noho ny rano mitete, ka matetika izy ireo no mihatra matetika. Ny mpitsabo anao dia hanome fanafody manokana momba an'io karazana olana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Mpianatra tsy mitovy amin'ny alika: inona no dikan'izany?
Salama, mariho fa ny alikako dia manana mpianatra izay misitatra kokoa noho ny iray hafa, azo atao ve izany satria ny saka no nandrakotra azy?
Valiny tamin'i Cynthia
Ahoana no ahafantarantsika fa madio ny Pitbull antsika?